Ogaden News Agency (ONA) – Israa’iil oo Weerartay Marinka Qaza ee Falastiin.
Israa’iil oo Weerartay Marinka Qaza ee Falastiin.
Posted by ONA Admin	/ July 16, 2018
Benjamin Netanyahu, Ra’isal wasaaraha Israa’iil, ayaa sheegay in ciidamada Israa’iil weerarkii ugu cuslaa tan iyo dagaalkii sanadkii 2014-tii ku qaadeen goobo ay mitidiinta Xamaas ku leeyihiin marinka Qasa ee dhulka Falastiin.
Waxa uu Mr. Netanyahu sheegay in weeraradaas lagaga falcelinayo falalka aragagixisada ah ee Xamaas waa sida uu hadalka u dhigaye, oo goobahooda gantaallo lagaga ganay dalka Israa’iil. Waxaanu ku adkaystay in weerarradaa laga fursan waayey in la adeegsado.
Dawlada Israa’iil waxay sheegtay in duqayntaa lagu baabiiyey goobihii tabobarrada ee ururkaa mintidka ahi uu kulahaa marinka Qaza, taasi oo ay Xamaas si kulul u beenisay, waxba kama jiraane ay ku tilmaantay. Saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniyiinta ayaa iyaguna sheegay in laba kuray oo dhawr iyo toban jirro ah lagu dilay eerarka Israa’iil, ugu yaraan shan iyo toban qof oo kalena ku dhaawacmeen magaalada Qaza.
Laanta gurmadka degdega ah ee adeega Ambalaasyada Israel ayaa iyaduna sheegtay in saddex Israel-iyiin ahi dhaawacmeen. Dhanka kale waan waayn iyo habad joojin ayaa lagu wadaa in ay ka dhaqan gasho marinka Qaza inkasta oo aysan wali kala cadayn inay Israa’iil kaga dhabayn doonto heshiiskan la gaadhay.